सुन तस्करीमा को–को? | PARDAFAS
सुन तस्करीमा को–को?
Posted: July 15, 2013 in By Deepak Kharel
यसअघि पटक–पटक प्रहरीले सुन बरामद गरे पनि तस्करी पक्राउ नपरी भरिया मात्र पक्राउ पर्दै आएका थिए। तर, सिआईबीले ३५ केजी सुनसहित दुई जना ठूला तस्करलाई बुधबार पक्राउ गरेर अब तस्करी पनि नछाडिने सन्देश दिएको छ। सिआईबीमा डिआईजी प्रकाश अर्याल प्रमुख भएर लाएलगत्तै तस्करसमेत पक्राउ परेको यो घटनाले प्रहरीमा पनि तरंग मच्चिएको छ। किनकि तस्करहरुसँग प्रायः प्रहरीकै साँठगाँठ हुने गर्दछ। तर, डिआईजी अर्यालले पहिलोपटक तस्कर नै पक्राउ गरेर राम्रो सन्देश दिएका छन्। तातोपानीबाट ३५ किलो सुन मगाउने तस्करद्वय मोहनकुमार अग्रवाल र ग्याम्जो लामालाई सिआईबीले बुधबार नै पक्राउ गरेको हो। यसअघि तस्करलाई प्रहरीले नै उन्मुक्ति दिँदै आएको थियो।
गत जेठमा प्रहरीले १६ केजी सुनसहित चार जना भरियालाई पक्राउ गर्‍यो। खासाका एक व्यापारी तातोपानीका चार स्थानीयलाई भरिया बनाएर पठाएका व्यक्तिलाई प्रहरी विशेष सुराकीको आधारमा पक्राउ गर्‍यो। जोरपाटीस्थित एक घरबाट उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरी सुन लिन गएका व्यक्तिको खोजी गर्दै थियो। तत्कालै टेलिभिजनमा फोन गरेर प्रहरी अधिकारीहरुले १६ किलो सुन समातेको समाचार बजाए। धन्य सुन लिन गएकाले समाचार थाहा पाएनन् र पक्राउ परे।
१६ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रहरीले कसरी गर्दाेरहेछ भन्ने कुराको यसले प्रष्ट पार्छ। त्यति गम्भीर किसिमको घटनामा प्रहरीले तस्करीलाई खोज्नुभन्दा पहिला पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुलाई भगाउनतर्फ चासो दियो। जसकारण पाँच हजार रुपैयाँको लोभमा तस्करी गर्नेहरु खोरमा पुगेका छन् भने अन्य मुख्य कारोबारी प्रहरीकै संरक्षणमा रमाइरहेका छन्।
यसरी भरियलाई जेल हालेर कारोबारीलाई उन्मुक्ति दिएको घटना यो पहिलो होइन। यसअघि पनि प्रहरीले पटक–पटक सुन बरामद गरेर तस्कर पहिचान हुँदासमेत पक्राउ गरेको छैन। जसले सुन तस्करीमा प्रहरीको मिलेमतो भएको प्रष्ट हुन्छ। मुख्य कारोबारी पक्राउ नपर्दा पछिल्लो समयमा
तस्करी पनि बढेको छ।
राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक र केही मारवाडी व्यवसायीको मिलेमतोमा नेपालबाट ठूलो परिणाममा सुन भारतमा तस्करी हुनुका साथै र अवैध कारोबार बढेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि त्यसमा चासो राखेर छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आइतबार मात्र निर्देशन दिएको छ।
स्रोतका अनुसार तातोपानीबाट आएको सुन अशोक श्रेष्ठ नामका व्यापारीको भएको प्रष्ट भइसकेको छ। तर उनलाई काठमाडौं परिसरले पक्राउ गरेको छैन। सुन लिन गएका भारतीय नागरिक भोटियोसँग उनको पटक–पटक सम्पर्क भएको छानविनको क्रममा देखिएको थियो।
को को छन् तस्करीमा?
नेपालमा करोडौं लगानी गरेर सुन पसल खोल्ने भारतीय व्यवसायीको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। सुन व्यवसायमा बैधानिक नाफा भनेको ज्याला मात्र हो। नत्र जति मूल्यमा सुन किन्यो त्यति नै मूल्यमा उनीहरुले बेच्नुपर्ने हुन्छ। खासै ठूलो नाफा हुँदैन। तर पनि किन ठूला पसलहरु खुलिरहेका छन्।
‘वास्तविक रुपमा व्यवसाय चलाएर ती पसलहरु चलेका छैनन्,’ स्रोतको दाबी छ, ‘न्यूरोडलगायत क्षेत्रका सुन पसलहरु अवैध धन्दाका अखडा हुन्।’ न्यूरोडमा सञ्चालनमा रहेका पवन अग्रवालद्वारा सञ्चालित जयमाता दी गोल्ड प्यालेस, निर्मल धानुकाद्वारा सञ्चालित बालाजी ज्वेलर्स, शक्ति बेगानी र कमल बेगानी, कमल अग्रवालद्वारा सञ्चालित सगुन डायमण्ड तथा विनय सिंहानियाद्वारा सञ्चालित रोहनी ज्वेलर्स तस्करीमा संलग्न रहेको स्राेतको दाबी छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले गत पुस ४ गते महाबौद्धबाट बरामद गरेको सुन बिशालबजारका व्यापारी बिके अग्रवालको भएको खुलेको थियो। तर, प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेन। जबकि गत भदौमा बरामद भएको सुन पनि उनकै भएको पुष्टि हुँदा पनि उनी कारबाहीमा परेका थिएनन्। अहिले पक्राउ परेका भरियाहरुको आरके ज्वेलर्सका मालिक राजेन्द्र शाक्य, होटल ग्रान्डका मालिकसँग नियमित सम्पर्क भएको स्रोत बताउँछ।
किन हुन्छ तस्करी?
सुन तस्करी हुनुको प्रमुख कारण भनेको माग अनुसार सुन उपलब्ध नहुनु हो। अर्काे कारण चाहिँ भारु र हुन्डीको खेल हो। नेपालमा हाल भारतीय रुपैयाँको माग दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। व्यवसायीले सहजै भारु पाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण बैंकबाट सिधैं भारतमा सुन पठाएर बैंक र व्यापारीले भारु भित्राउने गरेका हुन्। त्यसरी भित्र्याइएको भारु अवैध बजारमा सट्टा हुने गरेको छ। अवैध व्यापारका लागि भारु नमिल्ने भएकाले त्यसरी ल्याइएको भारु पनि अवैध व्यापारमा प्रयोग हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
अभावका कारण नेपाली बजारमा एक लाख भारु साट्नका लागि ५ हजार रुपैयाँ थप तिर्नपर्ने अवस्था छ। त्यो पनि सहजै प्राप्त हुँदैन। तर एक किलो सुन भारतमा पठाउँदा करिब ३० लाख भारु आउने त्यसवापत डेढ लाखभन्दा बढी नाफा हुने भएकाले बाहिरी रुपमा सुन पसलको व्यवसाय देखाएर व्यवसायीहरु सुनको तस्करीमा लागेका हुन्। स्रोतका अनुसार महिनामा एक सय किलोभन्दा बढी सुन भारतमा तस्करी भइरहेको छ।
हाल नेपाली बजार र भारतीय बजारको सुनको मूल्यमा खासै फरक छैन। एक तोला सुनमा करिब एक हजार रुपैयाँको अन्तर रहेकोमा तस्करी बढ्ने खतराले सरकारले तत्कालै भन्सार शुल्क बढाएको थियो। त्यसरी बजार अन्तर रहेको बेलामा अझ धेरै मात्रामा सुनको तस्करी भएको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समयमा तस्करी हुने सुनको मात्रा कम भए पनि नरोकिएको स्रोतको दाबी छ।
नेपालमा चीन, दुबईलगायतका देशबाट नेपालमा भित्र्याई भारतमा पठाइने गरिएको छ। एसएसपी रविराज श्रेष्ठको प्रकरण पनि त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। त्यस्तै गत असोजमा चीनबाट ल्याउँदै गरेका नौ किलो सुन काभ्रेमा बरामद भएको थियो।
फेसबुकमा लाइक गर्दा लफडामा परिएला
नेपाल र चीनको गेटवेमार्फत ठगी